कर्णालीवासीले मनाए ‘छोरा’ तिहार ! « Drishti News – Nepalese News Portal
कर्णालीवासीले मनाए ‘छोरा’ तिहार !
२ माघ २०७७, शुक्रबार 11:48 am
भाइ तिहारमा खेलिनेलाई देउसी र छोरा तिहारमा खेलिनेलाई भैलो भनेर भनिने उनले बताए । यो भैलो तिहारको देउसीभन्दा फरक ढङ्गबाट र फरक लयमा खेलिने गर्दछ । भैलो खेलेर मागेको चामल, धान, पैसा सबै भैलो खेल्न गएकाहरु सबै जना मिलेर पाठी भात स्थानीय भाषामा वनभोज खाने प्रचलन रहेको समेत उपाध्यायले बताए । छोरा तिहारमा आमा नहुनेहरुले भने स्थानीय मठमन्दिरमा गएर पुजारीको हातबाट टीका, अक्षता लगाएर छोरा तिहार मनाउने गर्दछन् ।
यस्तो छ छोरो तिहारमा खेलिने भैलोको केही अंशः